नेपाल आज | १३ नम्बर किन अशुभ मानियो ?
१३ नम्बर किन अशुभ मानियो ?
अंक गणितका नम्बरहरुको आफ्नै महत्व छ । तर तिनै नम्बर मध्ये १२ नम्बरलाई हेर्ने संसारकै नजर अलग्गै छ । यो अंकलाई अपसगुन मान्नेहरुको संख्या अनगिन्ती छ । यो अंक अशुभ किन भयो त ? तपाईं होटलमा जानुस १३ नम्बरको कोठा पाउनु हुन्न । ठूला ठूला व्यावसायिक मलमा १३ नम्बरको फ्ल्याटै बनाइएको हुँदैन । आवास गृहमा १३ नम्बरको तल्ला नै गायब हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने विश्व नै १३ फोवियाबाट ग्रस्त छ । १३ संग मानिसको दूरी बढ्नु पछाडि एउटा घटनाले काम गरेको छ ।
१३ तारिखका दिन एक भक्तले ईशा मसिहसंग विश्वासघात गरेको थियो । त्यो मानिस ईशासंग रात्रिभोजमा सहभागी थियो । अर्को संयोग त के परेछ भने ऊ १३ नम्बरको कुर्सीमा बसेको थियो । त्यही घटनापछि १३ अंक मानव मस्तिष्कमा १३ नम्बर दुर्भाग्यपूर्ण अंकका रुपमा छाउन थाल्यो । मानिसको मनभित्र यसपछि एकप्रकारको त्रास जन्मियो । गल्ती मानिसको थियो तर सजाय अंकले पायो ।
हुँदाहुँदा सार्वजनिक समारोह या होटलमा १३ नम्बरको कुर्सी या टेबलमा बस्न समेत मानिस अनिच्छुक देखिन थालेका छन् । फ्रान्सेली त १३ नम्बरको कुर्सीलाई समेत अस्वीकार गर्छन् । भारतको चण्डीगढ शहरमा १३ नम्बरको वडा नै राखिएको छैन । नक्शा बनाउने इन्जिनीयरले नै १३ नम्बर वडा विनाको शहरको रेखांकन गरेको थियो ।
श्रीमती छलेर प्रेमिका भेट्न जाँदा कोरोना भाइरस
सरकार जनताकाे अपेक्षाविपरीत चल्याे - डाक्टर रिजाल